Mune ino kosi yakanzi German hofisi fenicha, uko kwatinozoongorora yeGerman hofisi fenicha, isu tinokudzidzisa iwe unonyanya kushandiswa chiGerman hofisi fenicha uye fanicha. Chidzidzo ichi chinoenderana nekuisa mumusoro uye zvinokwana kutanga kudzidza mazwi anonyanya kushandiswa.
German Hofisi Fenicha Kunyangwe zvichiratidzika kuti kazhinji bhizinesi rine hukama neGerman, inyaya yakakosha sezvo paine michina uye zvinhu zvatinoshandisa munzvimbo zhinji dzehupenyu hwedu kunze kwenzvimbo yebasa. Tichapa runyorwa rwemidziyo inoshandiswa muhofisi, rondedzero yezvinhu zvinoshandiswa muhofisi uye rondedzero yemidziyo yehofisi mumatafura akapatsanuka.
Edza kuyeuka izwi rega rega mutafura yakapihwa nezvinyorwa zvavo uye nezvavanoreva. Ita shuwa kushandisa mazwi achangodzidziswa mumitsara panguva yezwi rako kuyeuchidza kuita Neiyi nzira, iwe unozoita kuti kuyeuka kuve nyore uye kuve kusingakanganwike.
Hofisi Zvishandiso ChiGerman chakaenzana
kombiyuta → Komputa
ratidza → der Bildschirm
Mutauri → der Lautsprecher
dhisiki → der Datentrager
runhare → foni
Kuteedzera muchina → iyo Photocopier
Fax muchina → dha Faxgerat
purinda → der Drucker
Cartridge → kufa Patrone
purojekita → der Projector
ChiGerman Hofisi Fenicha Inoratidzwa
Vadiwa shamwari, ngatitsanangurei anonyanya kushandiswa chiGerman hofisi michina ine mifananidzo.
Zvinhu Zvinoshandiswa muGerman Hofisi
Zvino ngatione zvinhu zveGerman zvinoshandiswa muhofisi petafura.
Zvinhu Zvinoshandiswa muHofisi ChiGerman chakaenzana
chipfudziso → der Radiergummi
Chigero → kufa schere
Pepa clip → kufa Büroklammer
Tambanudza Kunyora pad → der Schreibblock
Mutongi → das Lineal
Hamvuropu → der Briefumschlag
Chitambi → kufa Briefmarke
Glue → anodaro Kleber
Peni → der Fullfederhalter
bhiro → der Stif
Maka → der Fluoreszierender Stift
Penzura → der Bleistif
bepa → das blatt-papier
Bhata chinyorwa → der Block
bhuku → das Notizheft
faira → kufa Mappe
Slides → kufa Dias
Bhendi → das klebeband
Chikafu → kufa Hefter
karenda → der Kalender
Pazasi pane maGerman neTurkey emahofisi anonyanya kushandiswa emahofisi
German Hofisi Fenicha ChiGerman chakaenzana
Wastepaper tswanda → der Papierkorb
cheya → der Stuhl
mureza → kufa mureza
rambi → kufa Lampe
chiedza → Das Chiedza
busra anodaro 5 zuva rapfuura